Duullimaadyadii Diyaaradaha Addis Ababa oo loo duway Sudan iyo Djibouti | Berberanews.com
Home WARARKA Duullimaadyadii Diyaaradaha Addis Ababa oo loo duway Sudan iyo Djibouti
Addis Ababa-(Berberanews)-Waxa muddo kooban la hakiyey hawlaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee Bole International Airport.
Dhammaan duulimaadyadii ku soo socday maanta ayaa lagu wargeliyey in ay u weecdaan garoomada kale ee u dhaw magaalada.
Diyaaradaha ku jiray duulimaadyada caalamiga ah ee ku degi lahaa ayaa loo weeciyey garoomada caasimadaha dalalka deriska ah sida Djibouti iyo Khartoum.
Warbixin ay soo saartay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa lagu sheegay in dhamaan duulimaadyadii maanta ku degi lahaa Addis Ababa loo weeciyey madaarrada dalalka deriska ah.
Sababta ayaa ah roobab mahiigaan ah oo ka da’ay habeennimadii Axaddii iyo ceeryaamo badan oo ku giblan magaalada, taasina ay keentay in dhammaan duulimaadyadii ku soo fool lahaa oo dhan la weeciyo oo madaarka Bole na la xidho.
“Taxaddar xilkasnimo ah awgii, waxa duulimaadyadii ku degi lahaa Addis Ababa loo weecinayaa madaarrada ugu dhaw waxaanay u soo kici doonaan marka cilmiladu hagaagto” ayaa lagu yidhi warbixin ay soo saartay Ethiopian Airlines.
Shirkadda diyaaraduhu waxay ka raali gelinsay macaamiisheeda wixii dhibaato ah ee ka soo gaadha arintaas.
“Warbixin joogto ah ayaanu idinka siin doonaa kolba sida xaaladdu noqoto,” ayaya lagu yidhi.
Arintan ayay dadka qaar markii la shaaciyey ba u qaateen in wax kale dhaceen maadaama oo woqooyiga dalkaas dagaal u dhexeeya dawladda iyo ciidamada Tigray uu ka socdo.
Hase yeeshee waxa xaqiiqo ah in arinta keliya ee sababtay in diyaaraduhu ka weecdaan Addis Ababa ay tahay cimilada xumaatay awgeed oo aan waxba laga arki karin masaafo dheer ceeryaanta iyo roobabka waaweyn ee da’aya awgood.
Previous article“Ciidanka Qaranku qeyb muuqda ayuu ka noqonaya horumarka Somaliland..”Taliye Nuux I.Taani
Next articleIngiriiska oo xus u sameeyay diblumaasi reer Somaliland ah